Yoo gaafatni gabateewwanii ykn dirreewwanii baname jiraachuu baate,qaaqni Wahiyyoo Hanqatan ni mul'ata.Qaaqni kun gabateewwan hanqatan ykn dirree hin hikamne moggaasuu fi adeemsa kee akkamitti itti fufuu akka dandeessuu si gargara.
Akkamitti itti fufta?
Deebii kana deebisuuf maloota saditu jira:
Dhuguma gaafata saxaatoo mul'annoo keessa jiru banuu barbaaddaa?
Gaafata banuuf si gargaara Mul'annoo Saxaxaa wahiyyoo hanqatan jiraatanillee. Filannoon kun dogoggora biraa adda baasuuf si gargaara.
Gaafatni Mul'annoo Saxaxaa keessatti banama(graphical interface).Gabateewwan hanqatan duwwaa mul'achuu fi dirreewwan fashalaa maqaa isaanii (fashala) waliin tarree dirreewwanii keessatti argamu. Inni kunis akka ati sirritti dirreewwan dogoggora uuman adda baasuuf si gargara.
Gaafata Mul'annoo SQL keessatti bani
saxaxa gaafataa Haalata SQLkeessatti banuuf eyyamuu fi gaafata hiikuuf Dhaloota SQL. Haalaa dhaloota SQL dhiisuu kan dandeessuu yoo himni LibreOffice jedhu guutumaa guututti hikamee(yoo gabateewwan ykn dirreewwan fayyadamne ni danda'ama dhugumatti gaafatni jiraate).
Gaafata hin banin
Adeemsa balleessuuf fi akka gaafatni hin banamne ifteessi. Filannoon kun dalagaa qaaqa qabduuDhiisi jedhuuf gargaara.
Dogoggora walfakkaatan tuffadhu
yoo filannoo jalqabaa filatte, garuu ammas wanti hafe jiraatus ati gaafata saxaatoo mul'annoo keessatti banuu barbaadde akka dogoggorri biraa akka hin jirre ibsuu. kanaafuu, adeemsa amma banaa jirtu keessatti, yoo gaafatni sirritti hiikamuu baate ergaan dogoggorri hin jiru jedhu ni argama.
Title is: Wahiyyoo Hanqatan